Wed, Feb 21, 2018 | 11:10:53 NST
13:26 PM (6 months ago)
जय राज दाहाल
प्रश्नः कतारको लागि शुरक्षा गार्डको काममा भिसा आइसकेको छ। अहिले कतार जान समस्या छ कि छैन? मैले कतारको भिसालाई रद्द गरी मेरो पासपोर्ट फिर्ता पाउछुँ? त्यो भिसामा नगएर युएईमा शुरक्षा गार्डमा जान मिल्छ की मिल्दैन?
उत्तरः जय जी, कतारमा जानलाई अहिले केहि समस्या छैन। तपाईंले कतार जान नचाहे, भिसा आएपछि पनि नजानसक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईंले म्यानपावरलाई प्रशासनिक खर्च बापत १० हजार सम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानपावरले तपाईंको पासपोर्ट फिर्ता गर्छ। भिसा रद्द गरेको ६ महिनासम्म तपाईं कतार जान पाउनुहुने छैन। तर अरु देशमा रोजगारीमा जान कुनै समस्या हुने छैन।